छाडा पशु चौपायाबाट सास्ती
HOME » छाडा पशु चौपायाबाट सास्ती
डिसी नेपाल , ७ चैत्र २०७३
कोहलपुर (बाँके) । छाडा पशु चौपायाका कारण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका दिनप्रतिदिन कुरुप बन्दै गइरहेको छ । सवारी दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका घोषणा भएको करिब दुई वर्ष वित्नै लागेको छ । नगरका छाडा पशु व्यवस्थित गर्न नसक्दा सडक छेउछाउका व्यापारी, सवारी चालक, पैदल यात्रुमात्रै होइनन् रिक्सा र टाँगा चालकलाई पनि सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।
“छाडा पशु चौपायका कारण पैदल हिँड्न समस्या भएको छ”, नेपालगन्ज–१३ का जानकी थापाले भने – “छाडा पशुका कारण नेपालगन्ज सहरकै सौन्दर्य बिग्रिरहेको छ ।”
पैदल यात्रुलाई मात्रै होइन नेपालगन्ज कोहलपुर सडकखण्डमा सवारी साधन चलाउने चालकलाईसमेत छाडा पशुले सताउने गरेका छन् । “बीचबाटोमै आएर सुत्दिन्छन्, सधैँजसो सवारी दुर्घटनाको खतरा रहन्छ,” कोहलपुर–नेपालगन्ज सडकखण्डमा माइक्रोबस चलाउँदै आउनुभएका जनक चौधरीले भने – “न प्रहरीले हटाएको देख्छु, न नगरपालिकाले नै ।”
छाडा पशु चौपायाका कारण सडक छेउमा फलफूल र तरकारी पसल सन्चालन गर्दै आएका व्यापारीले सास्ती झेल्नुपरेको छ । नेपालगन्जमा विगत छ वर्षदेखि ठेलामा तरकारी बेच्दै आएकी लालुदेवी विष्ट छाडा पशुले तरकारी खाइदिँदा दैनिक घाटा व्यहोर्नु परिरहेको बताउँछिन् ।
चोक–चोकमा तथा सडक छेउमा व्यापार गर्ने व्यापारी छाडा पशु चौपायाका कारण हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । “नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भइसकेपछि हामीले थप सुन्दर होला भनेर सोचेका थियौँ”, नेपालगन्ज– १ धम्बोजीका सरिता अधिकारीले भने – “पशुचौपायाका गोबरका कारण सहर दुर्गन्धित हुँदै गइरहेको छ ।”
छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा निवेदन दर्तासमेत गराएका छन् । अधिवक्ताहरु गणेशमान केसी, वसन्त गौतम र सुनिता शर्माले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर अहिलेसम्म सुनवाई हुन नसकेको अधिवक्ता शर्माले बताए ।
छाडा पशु चौपाया छोड्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नु र छाडा छोडिएका पशुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु उपमहानगरपालिकाको गैरजिम्मेवार काम भएको सर्वसाधारणको आरोप छ । तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने व्यवस्थापनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ । सो उपमहानगरपालिकाका निरीक्षण उपशाखा प्रमुख पवनकुमार कनोजिया नगरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गर्दैआएको बताउँछन् ।
कान्जी हाउसमा राख्न ठाउँ नभएपछि नेपालगन्जदेखि १०० किलोमिटर टाढाको दाङमा पर्ने जङ्गलमा अघिल्लोपटक छवटा ट्रकमा र अहिले दुईवटा ट्रकमा छाडा पशु चौपाया लगेर छाडेको कनोजियाले बताए । “व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएको छ,” उनले भने।
समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ...
यस्तो छ ऐश्वर्या अभिषेकको २१ करोडको सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट, हेर्नुस् १२ फोटो
यसरी खिचिएको फोटो कस्तो आयो देख्नुभयो ? नदेखेको भए यहाँ हेर्नुहोस्
देख्दै सातो जाने एउटै युवतीका ७ सेल्फी, कमजोर मुटु हुनेले नहेर्नुहोला
पंखामा झुण्डिएको थियो आमाको लाश, त्यही कोठामा एक्लै ३ दिनसम्म बसे ६ वर्षका बालक
पूर्व प्रेमिकासँग बिग बोस होस्ट गर्दैछन् सलमान !
यहाँ युवती रोजेर सित्तैमा यौन सम्पर्क गर्न पाइन्छ, मान्नुपर्छ एउटा मात्रै शर्त
दोस्रो पटक बुवा भन्दै शाहिद कपुर
बिहेको पार्टीमा यस्तो खाना ! मेनु देख्दै पाहुनाको उड्यो होश !
कपिल समस्यामा फस्दै, सफलता चुम्दै डा. गुलाटी
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको घरमा विष्फोट
नग्न बन्दूकधारीको आक्रमणबाट अमेरिकामा चारको मृत्यु, तीन घाइते
भुवन के.सी. जियालाई लिएर सुटुक्क सिक्किम हानिए
बक्स अफिसमा नयाँ इतिहास रच्दै शत्रु गते, कति गर्यो कमार्इ ?
२ सय रुपैयाँ बोकेर काठमाडौं आएका अशोक दर्जी यसरी लखपति बन्दै
मलेसियास्थित हमासका वैज्ञानिकलाई आफूले हत्या नगरेको इजरायली दावी
विजेता म्यानेस्टर सिटीको शानदार जित, स्वान्सी सिटी ५–० ले विजयी
छोरीले खेलौना सम्झेर बन्दुक पड्काउँदा गोली लागेर आमा गम्भीर घाइते
४ घण्टा ढिलो सुरु भएको एमाले-माओवादी संयुक्त कार्यक्रममा जे देखियो...
पारमाणविक कार्यक्रमको आर्थिक स्रोत के ?